2 amboara vita amin'ny lamba rongony CLOUD - Mili Mili
Home > Andian-ondana 2 CHMUREK
Andian-ondana 2 CHMUREK
Ny ondana vita amin'ny orona ho an'ny rahona Moimili no soso-kevitray amin'ny fanaovana haingo ny efitrano an'ny ankizy. Izy ireo dia mety ho fanampin'ny tranolainay na trano fandriana na seza amin'ny seza. Milana misy: tantely, volondavenona, mavokely mavokely, ranomasina, marsala mahery. Rehefa misafidy ianao dia ampahafantaro anay raha misafidy ny lokon'ny ondana roa ianao. Raha tsy izany ny volon-tsampy voafidy arak'asa.